China Edge Protection Seal Strips ifektri abakhiqizi | UTianzheng
Imichilo yeminyango yezicabha newindi
Umugqa wensimbi yenjoloba yokwakha
Emapheshana uphawu ukuvikelwa Edge
Izimpawu zeminyango yeKhabhinethi
Izimpawu zenjoloba ezihlanganayo
Umugqa wenjoloba we-foam
Umugqa wenjoloba wokunamathela
Umugqa wokufaka uphawu kwemishini
Emapheshana Ukuvikelwa Seal emapheshana
I-Plastic Edge Trim ingasetshenziswa cishe noma yikuphi lapho izinga lokuhlobisa noma lokuvikela liyadingeka. Amapulangwe onqenqemeni lweplastiki ahlinzeka ngokuguquguquka, ukwahlukanisa, nokumelana namakhemikhali nanoma yiziphi izimo zezulu. I-plastic edge trim nayo ingamelana nawo wonke amazinga okushisa adlulele. Amapulangwe onqenqemeni lweplastiki ngokuvamile afika nensimbi yensimbi, esetshenziswa kunoma imuphi umphetho noma indawo ebushelelezi kufaka phakathi iminyango ye-RV, izinqola zegalofu, amakhumbi eloli, ogandaganda, izithuthuthu, ama-ATV fenders, i-fiberglass, ishidi lensimbi nokuningi.
Singanikela ngezixazululo ezahlukahlukene ukuvikela imiphetho yakho ekuthintekeni nasekulimaleni. Ukukhetha kwethu okubanzi kwamaphrofayli enjoloba wokuvikela onqenqemeni kufanelekile ukusetshenziswa kububanzi beshidi, iphaneli nobukhulu bomphetho. Sikhiqiza amaphrofayli wethu wokuvikela onqenqemeni avela kumakhemikhali ahlukahlukene ukuze avumelane nohlelo lwakho lokusebenza kanye nemvelo osebenza kuyo. Futhi singakhiqiza amaphrofayili we-bespoke emininingwaneni yakho ngqo, kuye ngobuncane be-oda.
Amaphrofayili wethu wenjoloba yokuvikela onqenqemeni enzelwe ngokukhethekile ukuncela imithelela ukuze uvikele imiphetho yakho ekulimaleni. Zibuye zisebenzele ukuvikela abasebenzisi ekulimaleni okungabangelwa yimiphetho emincane nebukhali. Sihlala senza amaphrofayli ethu kusuka kumakhemikhali esezingeni eliphakeme kakhulu atholakalayo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izivikeli zethu ezinqenqemeni azifanele ukusetshenziswa kuphela, kodwa futhi zenzelwe ukuhlala isikhathi eside. Ngaphandle kokunikela ngamandla amakhulu nokumelana nezinyembezi, izivikeli zethu ezinqenqemeni nazo ziguquguquka kakhulu. Lokhu kwenza amaphrofayli ethu alingane nezinhlobonhlobo zamajika.
Ungakwazi ukufaka izivikeli zethu eziningi ngaphandle kokunamathela. Lokhu akugcini ngokukwenza ukwazi ukufaka nokususa amaphrofayili njengoba kudingeka. Futhi ikwenza ukwazi ukusebenzisa ubude obubodwa izikhathi eziningi.
Isicelo: Ukuvikelwa komphetho ongachazwanga, ngombala wokuhlobisa
Umkhiqizo: I-Self Grip Edge Trim
Ubulukhuni (Ugu A): 67 - 82 °
Izinto: PVC, Insimbi
Umbala: Omnyama, obomvu, omhlophe, ompunga, oluhlaza okwesibhakabhaka
Usebenzisa isandla esisodwa, sigoqa ngokushesha unqenqemeni bese ngasikhathi sinye cindezela ngesithupha sesinye isandla lapho i-t / fast ihlangana khona nonqenqema. Ingasikwa kalula futhi ingancishiswa ijikeleze i-engeli eqinile ngokumane usike isigaba sika-V ngamazwibela wethini. Imikhawulo ingahlanganiswa ndawonye ngokufudumeza imikhawulo ethintekayo ngensimbi eshisayo.
Langaphambilini Ukwakhiwa Rubber Seal Strip
Olandelayo: Ehlanganisiwe Rubber Seal
I-Edge Protection Seal Strip
IKHELI: 1-1-601, uthayi Kuo Shang Cheng, Ye Jin North Road, Xingtai, Hebei, China